Waa maxay Anavar (Oxandrolone)? Oxandrolone (53-39-4), oo lagu iibiyey suuqyada magacooda ah ee Oxandrin iyo Anavar, oo ay ka mid yihiin dawooyinka asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo loo isticmaalo in lagu caawiyo kor u qaadista culeyska xaaladaha kala duwan, daaweynta corticosteroid muddo dheer, si ay u taageeraan ka soo kabashada gubasho daran, si loo daaweeyo lafaha xanuunka la xariira osteoporosis, si ay u caawiso horumarinta ...
Maxay tahay Trenbolone? Iyo sida ay u shaqeyso? Trenbolone enanthate (10161-35-8) iyo Trenbolone acetate (10161-34-9) ayaa ah labo ka mid ah steroids anabolic loo isticmaalo. Trenbolone Enanthate vs natiijooyinka Trenbolone Acetate waa isku mid. Farqiga u dhaxeeya waqti kasta oo u qaadanaayo inuu sii daayo saldhigga firfircoon ee Trenbolone. Inkastoo ay si fiican u muuqdaan, Trenbolone Enanthate iyo ...
Waa maxay Masteron Propionate (Drostanolone Propionate)? Masteron Propionate (521-12-0) iyo Masteron Enanthate (472-61-1) waa kala duwanaanshaha Masteron leh farqi yar. Waxay labaduba yihiin kuwo laysku duro waxayna ku badan yihiin kuwa jidhka sameeya. Farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya labada ayaa ah dawada qiyaasta iyo noloshooda nuskood. Qalabka Masteron Propionate ayaa yar yar laakiin la siiyaa maalin kasta tan iyo markii daroogada ay si dhakhso ah u shaqeyso oo ay nadiifiso ...